Iindawo ezigqibeleleyo zokuthenga imisesane yokuzibandakanya kwidayimane - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Iindawo eziPhambili zokuThenga iRandi yokuzibandakanya kweDayimani: kwiiVenkile eziGqwesileyo eziphezulu ze-Intanethi zika-2021
Ukufumana eyona ring ingcono yokuzibandakanya kunokuba yinto eyoyikisayo kunye ne-nerving-wracking. Sesinye sezigqibo zokuthenga ezibaluleke kakhulu oya kuze uzenze, njengoko iringi yedayimane ifuna ukugqibelela njengothando owabelana naloo mntu ukhethekileyo.
Nangona kunjalo, ukufumana eyona ndawo yokuthenga iringi yokuzibandakanya kunokuba ngumsebenzi omkhulu. Ngelixa indlela yesiqhelo yokuthenga iringi yokuzibandakanya iya kuba kukutyelela ivenkile yezacholo yezitena nodaka, abantu abaninzi babhenela kwiivenkile zejewellery ngezizathu ezimbalwa:
Ezonavenkile zinobucwebe kwi-intanethi zinokhetho olukhulu kakhulu lwamakhonkco onokukhetha kuwo, okwenza kube lula ukufumana iringi yokuzibandakanya yedayimane.
Abathengisi bedayimane abakwi-Intanethi banokuphantsi ngaphezulu, bakunike ixabiso elingcono lemali yakho.
Ukuthenga kwi-Intanethi kubonelela ngamava angcono okuthenga, njengoko ungakhathazeki malunga nabathengisi abanyanzelekileyo abanempembelelo kwisigqibo sakho.
Ukuthenga iringi yokuzibandakanya kutyalo-mali olukhulu, kwaye kubalulekile ukuba ukhethe ivenkile yobucwebe kwi-intanethi eyaziwayo. Kwesi sikhokelo, siphonononge zonke iivenkile eziphezulu ze-Intanethi ukukunceda ufumane umsesane ogqibeleleyo wokuzibandakanya. Inkampani nganye yavavanywa kukhetho lwedayimani, uku-odola inkqubo, uphononongo lwabathengi, kunye nexabiso.
Ngaphandle kokuqhubeka, nazi iindawo eziphezulu zokuthenga amakhonkco okuzibandakanya kwi-Intanethi:
UJames Allen : Best Diamonds Umgangatho namava Ukuthenga
UMlambo iNayile : Eyona ilungileyo xa uyila eyakho iringi
I-Flash emhlophe : Ezona zixhobo ziGqwesileyo zoPhuculo oluPhezulu
UJames Allen: Eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga imisesane yokuzibandakanya kwidayimani
UJames Allen yeyona ndawo ilungileyo ukuthenga isangqa somtshato kwi-intanethi. UJames Allen ngowona mthengisi okhawulezayo okhula yedwa wabucala okwi-intanethi kwihlabathi, eneedayimani ezingaphezu kwama-200,000 eziqinisekisiweyo, zonke zifotwe ngesisombululo esiphakamileyo esingu-360 ° HD. Ukubeka ngokulula, uJames Allen ubonelela ngeedayimani ezisemgangathweni ezisemgangathweni kunye nokhetho olukhulu ngexabiso elifanelekileyo.
Xa kufikwa kumakhonkco okubandakanya, zininzi izinto onokukhetha kuzo. Ukuba ukhetha ukuyila isangqa sakho sephupha, ungaqala ngocwangciso uze ukhethe ilitye leziko elifanelekileyo, okanye ngokuchaseneyo. Ukuba ufuna ukuphefumlelwa okuncinci, uJames Allen ubonelela ngeefoto zokucacisa okuphezulu kweendandatho zokubandakanya idayimane kubathengi bangaphambili.
Elona candelo lilungileyo malunga noJames Allen kukuba indawo yabo ikuvumela ukuba ujikeleze iidayimani uqobo kwi-360 ° HD kwaye usondeze ukuya kuthi ga kwi-40x magnification, ikunike ukhetho olukhulu lweedayimani ezandleni zakho.
UJames Allen ukwabonelela ngenkonzo yovavanyo lwedayim-yexesha lokwenyani ngomnye wabo bangagunyaziswanga abagunyazisiweyo. Oku kukuvumela ukuba wabelane ngescreen sakho kwaye ufumane isikhokelo seengcali njengoko uphonononga idayimane nganye kwi-360 ° HD. Baza kuhamba ngaphezulu kwesatifikethi sokubamba kunye nawe kwaye baphonononge zonke ii-specs, ukuze uthenge ngokuzithemba.
Ukongeza kwiiringi zokuzibandakanya, uJames Allen unokhetho olukhulu lomtshato, iidayimani ezikhululekileyo, amatye anqabileyo, kunye nezinto ezintle zokuhombisa. Ukusuka kwi-princess cut kunye nelebhu esele ikhulile iidayimani ukuya kumbala wedayimani wombala, uJames Allen unakho konke.
Uninzi lweedayimani ezivela kuJames Allen zihlelwe yiGemological Institute of America (GIA) kunye neAmerican Gem Society (AGS), into ethetha ukuba iimveliso zabo zithembekile kwaye ziyaqinisekiswa.
UJames Allen uyayiqonda indlela enkulu ngayo isigqibo sokuthenga iringi yokuzibandakanya. Kungenxa yoko le nto banikezela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-30 kunye nomgaqo-nkqubo wokubuyisa ukuba wena okanye iqabane lakho anonwabanga yiringi. Ngokukwanjalo, uJames Allen ubonelela ngewaranti yobomi kuyo yonke into ekumgangatho ophezulu wokuthengwa kwedayimane.
Ngokukhetha okuninzi kweemilo zedayimane, uyilo lwendandatho, imibala, iintlobo, kunye noseto onokukhetha kulo, uJames Allen yenye yezona zinto zibalaseleyo kwishishini.
Ukhetho olukhulu kakhulu lokuKhetha iRingi kunye noLuhlu lweDayimani
Imisesane yokuzibandakanya, iiDayimani ezikhululekileyo, iiBhendi zoMtshato, iiGemstones, kunye nokunye
Ukujonga i-360 Degree yedayimane nganye ene-40x Magnification
Ukuhanjiswa simahla kwe-inshurensi ngokugqibeleleyo kunye neMigaqo-nkqubo yokuBuya yeentsuku ezingama-30
Cofa apha ukuze undwendwele iwebhusayithi yeJames Allen esemthethweni
I-Blue Nile: Eyona nto ibalaseleyo kwiJeweler ekwi-Intanethi yeeDayimane eziQhelekileyo
IBlue Nile inikezela ngeedayimane ezikumgangatho ophezulu kwi-Intanethi ukusukela ngaphambi kwayo nayiphi na enye indawo yokuthengisa idayimane. Kude kube namhla, iBlue Nile isalwela eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga amakhonkco okuzibandakanya edayimane kwi-intanethi. IBlue Nile ikwabonelela ngemigaqo yokubuya yeentsuku ezingama-30 ukuba awonelisekanga yidayimani yakho.
Bhrawuza ukhetho lwabo olubanzi lweedayimane kunye namatye ukuze ufumane ubucwebe obusikiweyo obufanelekileyo ukuze uhlangane nohlahlo-lwabiwo mali kwimifanekiso yabo (kaJames Allen-inspired). Ngemifanekiso enesisombululo esiphakamileyo seBlue Nile, uyakufumana eyona mvakalelo ilungileyo yomgangatho weringi yokuzibandakanya kwisikali esikhulu kunokuba ungabona emntwini, oko kuthetha ukuba unokukhetha phakathi kwamawakawaka amakhonkco edayimani akumgangatho ophezulu de ufumane eyona kunokwenzeka. Ukuthenga iidayimani akukaze kube lula kunokusebenzisa i-jeweler ekwi-Intanethi njengeBlue Nile.
IBlue Nile ibonelela abathengi bayo ngeenkonzo ezingama-24/7 zabathengi, oko kuthetha ukuba yonke imibuzo yakho inokuphendulwa yingcali yenkonzo ukuba awuyifumani into oyifunayo kwi-Intanethi. Ukongeza, ukuba uthenga iringi yokuzibandakanya okanye idayimani kwiBlue Nile, ufumana ukufikelela kwi-rhodium free plating, ipolishi, ukucoca kunye nokuqinisa kabini ngonyaka. Ngenxa yokuba ukuhanjiswa simahla kufakiwe kuyo yonke into oyithengayo, uya kuba sele ugcina imali ngalo mzuzu ubambe ukuphuma.
Kwaye ungalibali malunga newaranti ye-Blue Nile yokuphila, enikezelwa kuyo yonke iringi yokubandakanya idayimani kunye ne-ring efanayo yokuzibandakanya kunye neemveliso zedayimane. IBlue Nile yindawo yokuthenga amakhonkco othethathethwano nokuba uyazi ukuba yeyiphi na imisesane yokubandakanya amatye ofuna ukukhetha kuyo okanye nokuba usaqala ukukhangela izitayile zeringi.
Enye yeeVenkile eziPhambili kwi-Intanethi kwiiDayimane ezenziwe yiLebhu
Iwaranti yasimahla yaBomi bonke ngokuThengwa
Inketho enkulu yokwakha iRingi yakho
Cofa apha ukundwendwela iwebhusayithi esemthethweni yeNayile eBlue
I-Flash emhlophe: Eyona ilungileyo kwiDayim
Ukuba ufuna ukuthenga iidayimani ezibonakala ngokulula, sukujonga ngaphezulu I-Flash emhlophe , umthengisi wedayimane. Lo mthengisi okwi-Intanethi uyaziwa ngomgangatho womyili kunye nenkqubo entsonkothileyo yokukhetha kuphela ezona dayimani zibalaseleyo, eziphezulu. Ukuba ujonge ukuthenga idayimane ephefumlayo, iFlash emhlophe yindawo yakho.
I-White Flash ithatha ixesha ukuxabisa nganye idayimani yazo, ibenza ukuba benze uthotho lweemvavanyo ngaphambi kokubabonisa njengo-Sika apha ngasentla. Njengongeniso lwangaphambili kuluhlu lwethu, i-White Flash ibonelela ngemifanekiso ye-HD yedayimani nganye, oko kuthetha ukuba ungabona zonke iinkcukacha zokugqibela zelitye lakho olifunayo, kubandakanya nokuba ijongeka njani kwii-engile ezahlukeneyo nangaphantsi kokukhanya okungafaniyo.
Ukuba ujonge ngokwenene kwiqabane lakho ngobucwebe obumangalisayo bedayimane, i-White Flash ngumthengisi wakho, njengoko besaziwa kakhulu ngokubonelela ngeemveliso zedayimani eziyiliweyo. Ezinye zazo zibandakanya uSimon G, uValoria, kunye no-Ajaffe, kunye nabanye abaninzi ukuba ukhangele. Ukuba umtsha kule nkqubo, indawo yabo ibandakanya ithebhu yemfundo, apho ungafunda khona ngakumbi malunga nedayimane, iinkqubo zokuhlela, ekugqibeleni zikuvumela ukuba wenze isigqibo esineenkcukacha sokuba loluphi uhlobo lwendibano yokuthenga ofuna ukuyithenga.
IFlash emhlophe yongeze inike iwaranti yenyanga enye, into engqinelanayo (kwaye iyaxatyiswa) kubo bonke abathengisi bedayimane abakwi-Intanethi. Ngokungafaniyo nabanye abaninzi, nangona kunjalo, i-White Flash izenzela ubucwebe. Ngelixa usafumana ilungelo lokukhangela iimveliso zabo zedayimani ezenziwe ngabanye abavelisi, le nto ikhethekileyo ikuvumela ukuba ufumane iidayimani ezinexabiso elifanelekileyo kunye neempawu zoyilo.
Ilungele ubucwebe obuhle kunye neDayim ephezulu
Inkqubo yoNyaka yokuBuya yokuThengwa kwazo zonke iiNtengo
Amanqanaba kwiZiko eliShishini eliNgcono
Cofa apha ukundwendwela iWebhusayithi yeFlash esemthethweni
Izinto ekufuneka ujonge kuzo xa uthenga iRandi yeDayim ekwi-Intanethi
Nokuba yeyiphi kwezi ndawo oyikhethele amava okuthenga, uya kuba ufumana elona xabiso lilungileyo ngaphandle kohlahlo-lwabiwo mali. Akukho ndawo ibhetele yokufumana iidayimani ezahlukeneyo ezibhangqwe ngenkonzo yabathengi ekhethekileyo. Khangela ingqokelela yendawo nganye yeedayimani zombala ezikumgangatho ophezulu, iidayimani zelebhu, iidayimani ezicocekileyo, kunye nokunye.
Ngeentlobo ezininzi zedayimane ezifumanekayo kuwe, okona kubaluleke kakhulu yile nto uyifunayo xa uthenga iringi yokuzibandakanya. Ukuba uthenga amakhonkco okuzibandakanya kwi-intanethi, ufuna ukuqinisekisa ukuba indawo yakho inikezela ngewaranti yobomi kunye nezixhobo ezibonakalayo ukuze ujonge ilitye ngalinye ngokujonga okumangalisayo. Gcina iliso kwintengiso yedijithali kunye nokunikezelwa okukhethekileyo, njengoko iivenkile zobucwebe kwi-Intanethi zihlala zineminyhadala yokwazisa.
Ngaphambi kokuba uthenge amakhonkco okuzibandakanya edayimane kwi-intanethi, jonga ukubona iziqinisekiso zesiza ngasinye. Isatifikethi esivela kwi-AGS silinganisa iidayimani ngokusekwe kumgangatho osikiweyo kunye nomgangatho. I-AGS ayaziwa nje kuphela, kodwa inkqubo yabo yokuhlela kulula ukuyiqonda, okuthetha ukuba awunasizathu sokungathengi kwiziko elisebenzisa izikhokelo ezicacileyo ukulinganisa iidayimani.
Ngokunjalo, izatifikethi ze-GIA, okanye iidayimani ezilinganiswe yinkqubo ye-4Cs, yenye into ekufuneka uyijongile. Ii-4Cs zibhekisa kubunzima bekharati yedayimani, umbala, ukucaca, kunye nokusikwa. Kuba bonke abathengisi bedayimane abakolu luhlu basebenzisa zombini izitifiketi ze-GIA kunye ne-AGS, kuba lula kuwe ukuba ujonge yonke imiba yeempawu zedayimane ngaphandle kokwenza uphando olongezelelekileyo. Ngethuba nje isiza sinika ezi ziqinisekiso, unokuqiniseka ngokuthenga iidayimane ezintle ngexabiso elifanelekileyo nokuba uhlahlo lwabiwo-mali okanye uzimisele ukuhlawula ukuthenga idayimane efanelekileyo kwimali yakho.
Ungalibali ukuba xa uthenga iidayimani kwi-Intanethi ngokusebenzisa aba bathengisi badumileyo, unokufikelela kwiintsuku ezingama-30 zokubuya ngokupheleleyo. Ayisiyiyo kuphela imeko ezivenkileni zomzimba, kodwa ikwanika noxolo lwengqondo lokukwazi ukubuyisa idayimani yakho ngaphandle kwengozi ukuba awuthanga ngokupheleleyo. Kodwa ngemifanekiso ekumgangatho ophezulu kunye nokujonga ividiyo kuzo zonke iivenkile ze-Intanethi, kunqabile ukuba ufumane imveliso engaphantsi kwento eboniswe kwivenkile ekwi-intanethi.
Izibonelelo zokuthenga imisesane yokuzibandakanya kwi-Intanethi
Ukuqala, ukuthenga iidayimani kwi-intanethi yinkqubo efanelekileyo. Ukuya evenkileni kwimozulu yethu yanamhlanje kuxinzelelo, ukusuka ekujonganeni nokuxinana evenkileni ukuya ekucwangciseni utyelelo evenkileni. Ukongeza, ijewelers zemveli zinengqokelela yedayimane encinci xa kuthelekiswa nabathengisi abakwi-Intanethi, abanokubonisa yonke idayimani ekhoyo, ngelixa ivenkile yakho ephakathi inokukuvumela ukuba ubone ukuba yintoni na enakho ukuyakha nangaliphi na ixesha.
Akukho sidingo sokujongana nabathengisi abakhohlakeleyo abajonge ukwenza imali ngokuthenga kwakho. Ukuthenga ngeringi yokuthenga kwi-Intanethi kuyakhawuleza kwaye kulula, kuyandiswa ngokwazi ukukhangela kumakhulu amawaka amakhonkco de ufumane enye ekutsalela amehlo. Ukongeza, ngaphandle kweendleko eziphezulu zejeweler yesiko, abathengisi abakwi-Intanethi bakunika elona qondo libalaseleyo ngexabiso elifanelekileyo.
Ukuba uthenga idayimane yakho kwi-intanethi, uyakonga imali oza kube uyihlawula kwirhafu yokuthengisa kwivenkile yesiNtu. Ngokunjalo, kuncinci okuphezulu kwivenkile ekwi-Intanethi, ke baya kuthi, banayo, babe neidayimani kumaxabiso aphantsi ebhodini xa kuthelekiswa nevenkile yakho yobucwebe. Ukudibanisa ezi nyani kungafuneki ujongane nabathengisi abaxhalabise ngakumbi ikhomishini yabo kunokuba wanelisekile, kwaye unamava athengayo nathembekileyo.
Ukufumana umsesane wakho womtshato kwi-intanethi kukuvumela ukuba uqhelane nokukhethwa kwejeeler nganye, nokuba bayazithengisa iidayimani zelebhu, iidayimani ezikhululekileyo, okanye amanye amatye kunye namakhonkco e-solitaire. Ngokungafaniyo nokuya kwisithili sedayimani yengingqi yakho kwaye ngokungcungcuthekisayo uhluza ukhetho lomthengisi wedayimani ngamnye, ukhetho olupheleleyo lwazo zonke ezivenkile ze-intanethi luyafumaneka kuwe ngokucofa imouse yakho. Unokukhetha idayimani enemvelaphi ecocekileyo kwaye wenze ngokwezifiso ukuseta iringi, konke okuvela kwinduduzo yesingqengqelo sakho.
Indawo nganye inikezela ngenkonzo enkulu yabathengi, okuthetha ukuba ungabuza imibuzo kwaye unciphise ukhetho lwakho ngendlela yesiko, ukuba yile nto uyikhethayo. Nangona kunjalo, ngezixhobo ezibanzi ezifumanekayo kuwe kwisiza ngasinye, lonke ulwazi onokulufuna ngeringi yakho luya kuba phambi kwakho, lufikeleleke ngokulula. Qiniseka ukuba ufunda i-FAQ yesiza ngasinye kunye namaphepha olwazi, njengoko zibonelela ngetoni yokuqonda okuxabisekileyo malunga neemveliso zabo-eziluncedo kwidayimane aficionados nakwabafikayo ngokufanayo.
Ngaphandle koxinzelelo lweevenkile zomzimba, ungathatha ixesha lakho ukukhangela uninzi lwabathengisi abathengisa iringi kwi-intanethi, uhluza ingxelo nganye yokufaka iringi, kwaye ufumane amatye obusoloko uphupha ngawo. Ukuba uzingela kakhulu amaxabiso, abathengisi abakwi-Intanethi zezona ndawo zilula zokucoca ingqokelela ebanzi ngokumangalisayo ukuze uqiniseke ukuba ufumana elona xabiso liphezulu kwidola yakho.
Ukuthengwa kwedayimane kutsha ngokwenene kwaye kuphuculwe kule mihla yethu. Ukuthenga kwaba bathengisi bakwi-intanethi kukubonelela ngendlela engenaxinzelelo yokufumana idayimani engalibalekiyo kulowo umthandayo. Zenzele ubabalo kwaye ulibale iivenkile zobucwebe bendabuko; bathenge iidayimani kwi-intanethi.
Iingcinga zokugqibela-Ngaba ukuThenga iRandi yokuzibandakanya kwi-Intanethi kubhetele kuneVenkile yobucwebe?
Njengokuba bekungabonakali kakade, eyona ndawo ifanelekileyo yokuthenga iringi yokuzibandakanya ikwi-Intanethi. Iivenkile zemveli azinakho ukubonelela ngokudityaniswa kwexabiso, isiqinisekiso sokubuyiselwa imali, iwaranti yobomi, okanye ukhetho oluphezulu olunokuthi abathengisi bedayimane bakwi-Intanethi. Indawo nganye inonxibelelwano olukhethekileyo kunye nomenzi wabo ngamnye, oko kuthetha ukuba akukho mntu uphakathi oza kungena kuwe kunye neqela lomtshato elifanelekileyo.
Elona candelo lilungileyo awunakuphulukana nalo. Jonga ukuba kutheni amawaka abanye esenza ukhetho lokuthenga iidayimani zabo kwi-intanethi. Abathengisi bedayimane abakwi-Intanethi bathatha lonke uxinzelelo kumava kwaye banikezela ngenkonzo ebalaseleyo kubathengi. Ngcono nangoku, kunye neziqinisekiso kunye nemifanekiso ye-HD efumanekayo kuwe kwiscreen, uvuna izibonelelo zophando olucokisekileyo kunye nobuchwephesha obuthembekileyo.
Ngaphakathi endlwini, izinto zexabiso lobucwebe ezikwi-White Flash, ingqokelela enkulu ebalaseleyo evela kuJames Allen, kunye nexabiso elikhulu emva kokuthengisa kwiBlue Nile, akukho mntu uza kuthenga iringi yokuzibandakanya kufuneka abenengxaki yokufumana into abayifunayo. Nganye yezi ndawo inikezela ngenkonzo ebalaseleyo kubathengi kunye namanqaku afundisayo malunga needayimane kunye nenkqubo yokuthenga, ke nokuba umtsha kule nkundla, unokufumana ulwazi ngokukhawuleza kwaye uqalise ukukhetha idayimane efanelekileyo.
Ukuthenga iringi yedayimane kunokuba noxinzelelo, kodwa akufuneki kube njalo. Abathengisi banamaqhinga kwimikhono yabo yokwenza umnikelo wabo ubonakale ungcono kunabo. Xa uthenga kwi-Intanethi, into oyibonayo yile uyifumanayo. Ukongeza ekufumaneni ubunyani bokwenyani bendlela idayimani nganye ebukeka ngayo kwaye kufanelekile, weqa imigca kunye nobunzima bokuthenga ngokwakho. Naliphi na kwezi ndawo ziya kukuvumela ukuba uhambe ngenkqubo yokuthenga iindandatho kakuhle, kwaye unokwazi ukuthelekisa uluhlu lweziza ngalunye.
Ulinde ntoni ke? Ukuqalisa kulula kakhulu. Jonga iisayithi ezikhethwe liqela lethu kwaye ubone uhlobo lokuchaneka kwedayimane ophuphe kuphela ngayo.
Kuphi ukuThenga konke ukuKhangela kwiXesha lesiXeko seBanzi
Ubusuku Ndaya Kumcimbi Wokuzalwa kaPrince
I-Quack kunye nabafileyo: I-Rubber Ducky Art Knock-Off ichazwe ePhilly
Abantu bayoyika ngakumbi iiClown kunye namaSilamsi kunoKufa, iZifundo zifumanisa
jeb bush yehla kugqatso lobongameli
Umnxeba ongcono wesaul isizini 3 isiqendu 1 ukuphononongwa
indlela yokwenza imvelaphi yokujonga umntu
Ukuphanga delaney kunye sharon horgan
apho unokufumana khona iintlanganiso eziqhelekileyo
yi-cum okanye iza
eyona ndawo yokuthenga imbewu ye-cannabis